ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: "အဘယ်သူမျှမတပေါင်းတစ်စည်းတည်းပြည်နယ်ပိုမိုနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ယူနစ်လိုလား" - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Autres "ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး:" အဘယ်သူမျှမတပေါင်းတစ်စည်းတည်းပြည်နယ်ပိုမိုနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ယူနစ်လိုလား "
တချို့ကကင်မရွန်းပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း၏မိန့်ခွန်းမတိုင်မီဇီဇာကြောင်ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်နယ်၏သူတို့ရဲ့အမြင်အတွက် Buttressed soviétomorphe, အတွေးအခေါ်ရှင်အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားများအတွက်, သူတို့ဇာတ်ကောင်အဘို့ဤလုံးဝအံ့သြဖွယ်သတင်းစကားများ၏တော်လှန်သဘောသဘာဝကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။
သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ်, Biya Bi Mvondo ဘာသယ်လဲမီပေါလုသည်ဒီပလိုမာနှင့်အတူအဆင့်မြင့်လေ့လာရေးပြည်ပ၏ Institute ၏ဟောင်းတစ်ဦးကျောင်းသားတစ်ယောက်က "ပြင်သစ်ပြည်ပ၏ကိုလိုနီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး။ " ပြီးတော့သည်အထိသူဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖန်တီးသောသူတို့ကိုအသစ်ကင်မရွန်းသက်ဆိုင်တဲ့ပြန်ဆောက်သည်သူ၏ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလတ္ထုထဲမှာယုံကြည်သည်။ သမ္မတအပါအဝင်နှစ်ပေါင်းအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု, သူသည်အဘယ်သူ၏သာယုတ္တိဗေဒလျှော့ချခဲ့သည်တစ်ဦးက "နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ဂရိတ်ရဲဘော်မညျးတျောကို" ၏အမိန့်အောက်မှာဒီ post-ကိုလိုနီပြည်နယ်၏ယုတ္တိဗေဒစွန့်ပစ် 86 ဒါဟာ 58 နှစ်ပေါင်း 37 နှစ်မသိမမြင်နိုင်သောခဲ့သည် တစ်ဦးလို့ခေါ်လူသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဌာနေတိုင်းရင်းသားများလူဦးရေတို့ကိုနှိမ့်။ ဒါပေမဲ့သူကလုပ်ခဲ့တယ်, ဒါဟာကင်မရွန်းကျနော်တို့လိုချင်တဲ့အသစ်သောကင်မရွန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ထိုသို့သောကင်မရွန်းသာအနှစ်သာရထဲမှာတစ်ခုလုံးကိုအဝန်း၏ segment အဖွဲ့အစည်းကိုမြှင့်တင်ပေးသော, အာဖရိကတန်ဖိုးများအပေါ်လုပ်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ မဆိုအာဖရိကအသိုင်းအဝိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အမျိုးအနွယ်သို့နှင့်ethnorégionaux segments များအတွက်အထက်အုပ်စုဖွဲ့အလှည့်အတွက်မျိုးနွယ်စုများသို့ ခွဲ. မိသားစုများဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကင်မရွန်း၏ပြည်နယ်အထိနို့စို့နေဖြင့်ဖွင့်လေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်ထိုလူမြိုးအပေါ်စည်းကြပ်ရန်, မျိုးပွားရမည်ကင်မရွန်းလူမှုဗေဒနှင့်အတူလိုက်လျောရန်နှင့်အမျိုးသားရေး really- ပြည်နယ်, မကပ်ပါးဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်လာဒီမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် အရိုးရန်။ နှင့်ဒုက္ခအတွက်တိုင်းပြည်ကဆင်းရိုက်နှက်နှင့်အမုန်း, လူမျိုးစုပြိုင်ပွဲနှင့်စစ်၏ကွိတို့ကိုများပြားစေ။ ကျနော်တို့ကဒီပုံစံကိုအဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့် Biya ကိုထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာကင်မရွန်းတိုင်းပြည်၏ကျန်တစ်ဦးဘေးအန္တရာယ်စီးပွားရေးကန္တာရမျိုချ, တိုင်းပြည်၏ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များ 90% နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလဲလှယ်၏ 90% စီမံခန့်ခွဲခြင်း, Yaounde နှင့်ဒူအာလာလျှော့ချကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်ပါ! ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက် 1000 သန်းမြို့သားတစ်ဦးမြို့ရှာဖွေမတွေ့ရှိဘဲ, 10Millions သူမြို့သားကီလိုမီတာကျော်နှင့်2ကျော် Maroua, Garoua, Ngaoundere နှင့် Bertoua ကူး, Kousseri ထားခဲ့ပါကြောင်းပုံမှန်မဟုတျပါဘူး မြို့ပြ 50% သည်အဘယ်မှာရှိ! ထိုသို့ကင်မရွန်း၏ဇာတိလူဦးရေရဲ့ 30% ပါဝင်သည်သောအနောက်နိုင်ငံများနှင့်အနောက်မြောက်, Bamenda နှင့် Bafoussam တူသောမြို့များမှအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး 2,5 သန်းတစ်မြို့ကိုရှာဖွေသင့်ကြောင်းပုံမှန်မဟုတျပါဘူး မြို့သားတို့။ တစ်ကျိန် system ကို hyperconcentrated ဘာလို့လဲဆိုတော့, လှသောကြောင့်၎င်း၏အောင်မြင်ရန် Yaounde နှင့်ဒူအာလာနှင့် phagocyte အတွက် stacks နိုင်ငံရဲ့အပေါငျးတို့သစွမ်းအင်ယူတာပဲဗဟိုမှ "အမျိုးသားရေးယူနစ်။ "
ကင်မရွန်းစီရင်ချက်ကိုပယ်နှင့်ဖျက်သိမ်းသည်အစဉ်အမြဲမင်္ဂလာဖြစ်စေဒီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Nation အောက်ပါအတိုင်းတစ်ပြည်နယ်တည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကအိမ်ခြံမြေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခြင်းဖြင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အစစ်အမှန်ကိစ္စများမှကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံချင်သောအယောငျဆောငျနောက်သို့မလိုက်သင့်ကြောင်း, ဤအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏။ ကင်မရွန်းအာဏာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ရှိပါတယ်! ဒါဟာပြည်နယ်၏ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိပါတယ်။
ဒါဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန် Biya ကင်မရွန်း၏သိသာထင်ရှားသောအချိုးအစားအားဖြင့်စိန်ခေါ်မဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အပြင်မဖြစ်စလောက်ဆန္ဒပြလက်တဆုပ်စာကနေ Biya ကင်မရွန်း၏ဥပဒေရေးရာနှင့်တရားဝင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စဉ်းစားသည်။ cons အသုံးပြုပုံပြည်နယ်အာဏာပိုင်နက်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့အငြင်းပွားမှုရှိပါတယ်။ အနည်းငယ်ကင်မရွန်းတစ်ဦးကပ်ပါးဗျူရိုကရေစီအောက်ရှိကင်မရွန်း stifles ရာသွေ့ခြောက်ဒီဗဟိုစနစ်, အတူသဘောတူသည်။ Anglophones, သူတို့ရဲ့အတိတ်ဖက်ဒရယ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူ, ဒီခေတ်မမီတော့မော်ဒယ်ဆန့်ကျင်လက်နက်ချီလျက် Biya နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
သူကလူတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်, ပြည်နယ်၏အခြေခံကျသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက်ဘဝဖွင့်လှစ်ထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားထက်ပိုကောင်းတဲ့ network'd တိုင်းသစ္စာက၎င်း၏အငြင်းပွားမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အတှကျပွငျဆငျပျော်မွေ့ဖို့ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပြည်နယ်ကိုင်ရရန်နေကြတဲ့အလိုဆန္ဒ, တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့အစည်း, တစ်ဦးချင်းစီအတိုးအုပ်စု buttress ဒီဂရိတ်ဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်။ ကင်မရွန်းဖက်ဒရယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာတဦးတည်းနှင့်ခွဲခြားဆက်လက်တည်ရှိမည်, သို့သော်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သငျသညျမြို့ပြ၏ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်လူတိုင်းအတွက်, ဖိတ်ခေါ်နှင့်နေဆဲ CPDM ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်သူမှပေါင်းတစ်စည်းတည်းပြည်နယ်နှင့်သာ 4.750 ဘီလီယံအထိဘတ်ဂျက်၏သီးသန့်စီမံခန့်ခွဲမှုသငျ့လျြောမှဒေသခံဗျူရိုကရေစီတစ်လှည့်ကွက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏ "အမျိုးသားရေးယူနစ်" ၏လိုလား!
ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုဆိုသောသူတို့အဘို့အဖြစ်မိမိတို့ဒေသဆိုင်ရာပြည်နယ်သက်သေပြလူတိုင်းမြင်သည်ပထမဦးဆုံးသွားရရန်တောင်းဆိုကြသည်! ဒါဟာအစကဒီမှတပါးဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွားသည်: သင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်လူများ, သငျသညျဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာ knights လူအပေါငျးတို့နှင့်အတူကောင်းသောအမှုကိုပြုနိုင်ကြောင်းပြသပါ။ ဒါဟာဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ထဲမှာ, ဖက်ဒရယ်သမ္မတဟောင်းတဦးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ 90% ဖြစ်ကြောင်းဘာမျှမဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ဒရယ်ကင်မရွန်းနှင့်အတူဆက်ခံ၏ပြဿနာကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေပါလိမ့်မည်: Biya ကိုအတောအတွင်းအစီရင်ခံပါလိမ့်မည်သောပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသော, တစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်အဲဒီမှာနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝန်တို့တွင်အကောင်းဆုံးသူသည်မိမိပြည်နယ်အဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယ်အရာကိုအလုံးစုံတို့အဘို့ကင်မရွန်းရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းဖက်ဒရေးရှင်းသွားပါရန်နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသွားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်း။
ကင်မရွန်း: မောရစ် Kamto နှင့် Ayuck Tabe မစ္စတာ Muna Akere အဆိုအရကြီးစွာသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်အနည်းငယ်များလွှတ်ပေးရေး
ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: နီယောဟနျသ Fru NDI ၏ပါတီတစ်ခုအမေရိကန်ဖျန်ဖြေမကြားခဲ့ဘူး
Online Press Patronage ကိုကင်မရွန်းတွင်မွေးဖွားသည်
ဆီနီဂေါ: Khalifa Sall စကားလုံးသုံးလုံးနှင့်ထွက်ခွာ - JeuneAfrique.com
ရ ၀ မ်ဒါရှိ Tutsi လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု -“ သင်၏ကလေးများအားလုံးကွဲပြားသွားပြီ” မတိုင်မီနှင့်နောက်ပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများ - JeuneAfrique.com
Bertrand Cantat - အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်ဤစီမံကိန်းအသစ်
အိန္ဒိယ - J & K အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ၊ Ladakh UT မှလစာရလိမ့်မည်ဟု731 လုပ်ခလစာကော်မရှင်အောက်တိုဘာ | အိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,384